दादुराको प्रकोप संसारभरि बढ्दै, के हो दादुरा, दादुराबाट कसरी जोगिने ? – Jaljala Online
Posted on June 1, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
डा.अनिलराज ओझा । दादुरा भनेको बालबालिकामा देखिने एउटा रोग हो। यो सरुवा रोग हो। यो मिजल्स भाइरसले गर्दा हुन्छ। अहिले आएर दादुराको प्रकोप बढ्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ र २०१९ सम्म दादुराको संक्रमण ३ सय प्रतिशतले बढेको छ। यसले के देखाउँछ भने बालबालिकाहरू दादुराबाट पीडित हुने मात्रा एकदमै बढेको छ।
नेपालमा पनि गत २/३ महिनामा दाङ,कपिलवस्तु र मोरङमा दादुराका संक्रमितहरू धेरै देखिएका छन्। त्यहाँ महामारी जस्तै भयो। एउटै इलाकामा १५,२० जनासम्म पनि देखिएका थिए। यो सामान्य होइन। नेपालमा पनि खोपका कारणले कम भएको दादुरा दोहोरिएर आउने गरेको छ।
दादुरा लाग्दा के हुन्छ
दादुरा ‘भाइरल इन्फेक्सन’ले हुने भएकाले बालबालिकामा बढी देखिन्छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा यसको संक्रमण बढी देखिन्छ। सुरूमा रुघाखोकी लाग्छ,घाटी दुख्ने,आँखा रातो हुने हुँदै जान्छ।३/४ दिन रुघाखोकीको जस्तो लक्षण देखिन्छ। चौथो दिनदेखि शरीरमा डाबरहरू देखिन थाल्छन्। अनुहार र कान पछाडिबाट सुरू भएको डाबर विस्तारैमाथिबाट तल सर्दै जान्छ। शरीरभरि डाबर देखिएपछि पहिला थोरै मात्रामा आएको ज्वरोपछि एकदमै बढ्न थाल्छ। १०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउँछ। योसँगै यसले ल्याउने समस्याहरू पनि छन्। दादुराकै कारण निमोनिया हुन्छ, स्याँ-स्याँ हुन्छ। कहिलेकाहिँ इन्सेफ्लाइटिज हुन्छ,वान्ता हुन्छ र बेहोस पनि बनाउँछ। यसका धेरै जटिलताहरू छन्।
६ महिनासम्म आमाको दूधमात्रै खाने भएकाले दादुरा देखिने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसपछि भने दादुराको जोखिम हुन्छ। दादुराको खोप ९ महिना पुगेपछि मात्रै दिइन्छ।
दादुराबाट कसरी जोगिने
दादुराबाट जोगिने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यसको खोप हो। ९ महिना पूरा भएर १० महिना लागेपछि दादुरा,रुबेलाको खोप सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क लगाइन्छ। १५ महिनामा फेरि अर्को खोप दिइन्छ। खोप नै दादुराबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खाना खुवाउनुपर्छ। खोप लगाएपछि दादुरा पूर्णरूपमा ठीक हुने होइन तर रोक्नलाई मद्दत गर्छ। दादुरा संक्रमितको संसर्गमा बस्नु हुँदैन। खोप लगाइसकेपछि ९० प्रतिशत दादुरा रोक्न सकिन्छ। दादुरकै भने उपचार हुँदैन। यो आफैं निको हुन्छ। तर दादुराका कारण लागेका रोगहरूको उपचार गराउनुपर्छ।
खोप लगाउँदा बालबालिकालाई कस्तो हुन्छ
खासै धेरै कठिन हुँदैन। सामान्य देखिने भनेको दुखाइ हो। खोप लगाएको ठाउँमा अलिकति दुख्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा खोपका कारणले बच्चालाई ब्लड प्रेसर कम हुने हुन्छ तर यो दुर्लभ जस्तै हो।
दादुराको खोप अझै पनि १० देखि १५ प्रतिशत बच्चाहरूले लगाउन पाएका छैनन्। दादुराको खोप नलगाउँदा त्यसको खतरा अझै बढी हुन्छ। दादुराको खोप निःशुल्क रूपमा लगाइन्छ। संसारभरि नै दादुराको प्रकोप देखिएको छ। त्यसैले समयमा नै यसको खोप लगाउने गरौं। संक्रमित बिरामीबाट अलि पर बसौं।
(पाटन अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ ओझा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सह-प्राध्यापक हुन्।)
Posted on September 6, 2019 Author Jaljala Online
जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै मानिसको खानपिन पनि बदलिएको छ । बेस्सरी मसला हालेको खाना खाएर एसिडिटी हुन्छ जसका कारण शरीर र पेट भारी हुन्छ । यस्तो स्थितिमा औषधि खाँदा पनि तपाईँलाई निको नहुन सक्छ । तर नडराउनुस्, पेटमा ग्यास जम्ने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि घरेलु उपाय छन् । १. अमला तपाईँलाई एसिडिटीको समस्या छ भने अमलाको […]
Posted on May 20, 2019 June 9, 2019 Author Jaljala Online
यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो […]
आज कामिका एकादशी-यस्तो छ एकादशीको महत्व
श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी तिथिलाई कामिका एकादशी भनिन्छ । यस दिनमा नेपाल तथा भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा बसोवास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत राख्नुको साथै यसलाई एक पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । हरेक एकादशीका आआफ्नै महत्व भएपनि शिवको महिना अनि कृषीकार्यको उत्सर्गमा हुने यस श्रावण कृष्ण पक्षको एकादशी कामिकाको महत्व अलिक पृथक पनि छ […]
लगातार ६ घण्टासम्म पब्जी खेलेका एक किशोरको हृदयघातका कारण मृत्यु
‘महारानी’ भन्दै बालुवाटारबाट ठगीधन्दा चलाउने लक्ष्मी, यस्तो छ वास्तविकता [नालीबेली]